Maxay ku dambayn doontaa Daacish kadib Ciraaq iyo Suuriya? - BBC News Somali
Hay'adda Laanqeerta Cas ee Caalamiga ah ayaa dalalka adduunka ugu baaqday in aanan la hilmaamin bini'aadanimada marka lala macaamilayo maxaabiista tirada badan ee laga qabtay kooxda Daacish.
Daacish oo "gubtay" laba askeri oo Turki ah
Image caption Dagaalyahanada shisheeye ee Daacish
Lahaanshaha sawirka UN/PAULO FILGUEIRAS
Waxaa fikirkaas la qabta ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan xadgudubyada bini'aadanimada Agnes Callamard.
Agnes iyo Reed Browdy oo ka tirsan hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa waxa ay isku raacsanyihiin in haddii la fuliyo hadalkii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ahaa in gaas iyo sun lagu laayo Daacish ay taas tirtiro karto caddaymo muhiim ah oo ku saabsan dambiyo dagaal oo la galay.
Image caption Burburka magaalooyinka ay Daacish qabsadeen
"Xaq ayaan u leenahay in aan wax ogaano wixii dhacay, sida ay Daacish u shaqayso si taariikhda ay u qorto, iyo cidda qarashka siisa" ayay tiri Agnes.
Inkasta oo ciribtirka Daacish iyo kooxaha kale ay u muuqato xal lala dhoco, haddane sida uu qabo Hamilton "Qaabka loosoo afjaro colaad ayay ku xirantahay nooca ay tahay nabadda ka dambeyn doonta" ayuu yiri, isaga oo intaas ku daray in hadalada qalafsan ee siyaasiyiinta jeedinayaan ay uga sii dari karaan xaaladda hadda taagan.
"Sharcigeena waxa uu dhigayaa in xitaa dadka ugu arxanka daran ay helaan caddaalad£ ayay tiri Agnes iyada oo tusaale usoo qaadatay dagaalkii labaad ee adduunka iyo sidii loola dhaqmay dadkii geystay gabood falada.
Image caption Mid ka mid ah hoggaamiyeyaashii Nasiga Jarmalka Hermann Goering oo maxkamad lasoo taagay 1946-dii